တစ်ခါမှမမြင်ဖူး၊ မဆုံဖူးပေမယ့် မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအပေါ်ကိုလည်း ပညာတွေသင်ပေးတဲ့ ထက်ထက်မိုးဦးအကြောင်း ပြောလာတဲ့ အုပ်စိုးခန့် - Myannewsmedia
ချောမောပြေပြစ်တဲ့ ရုပ်ရည်အပြင် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အပြုံးနဲ့ ချိုသာတဲ့ အသံလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အဆိုတော် အုပ်စိုးခန့်ကတော့ အမိုက်စားသီချင်းတွေကိုလည်း အထာကျကျသီဆိုလေ့ရှိတာကြောင့် နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့နှလုံးသားကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ အုပ်စိုးခန့်က သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အဖြစ်လည်း ပြုလုပ်လာခဲ့ပြီး “အိပ်မက်တွေမိုးထားတဲ့အိမ်” ဇာတ်လမ်းတွဲမှာလည်း နေခြည်ဦး၊ မိုရီဆာကီဝင်းတို့နဲ့အတူတူ အတွဲညီညီ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ အသက် (၁၈) နှစ်စွန်းစွန်းသာ ရှိသေးတဲ့ အုပ်စိုးခန့်ကတော့ သူ့ရဲ့ကြိုးစားမှုကြောင့် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ အောင်မြင်မှုရရှိနေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အလုပ်တွေဆက်တိုက်ကြိုးစားနေတဲ့ အုပ်စိုးခန့်က ဒီတစ်ခါမှာလည်း နိုင်ငံကျော် အကယ်ဒမီထက်ထက်မိုးဦးနဲ့အတူတူ နာမည်ကြီးကားအမှတ်တံဆိပ်ကို အွန်လိုင်းကနေ ရောင်းချပေးခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အုပ်စိုးခန့်ကတော့ ထက်ထက်မိုးဦးနဲ့ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ဆုံတွေ့စဉ်မှာပဲ သင်ယူစရာတွေရရှိခဲ့ကြောင်းကို “အပြင်မှာအရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ မထက် ! ပညာတွေများကြီး သင်ပေးတယ်။ ပြီးတော့ များကြီး လဲ ဆုံးမစကားတွေပြောသွားတယ်🙏🏻💞 Cutestttt 💞💞💞💞💞” ဆိုပြီး ထက်ထက်မိုးဦးအကြောင်း ပြောလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ထက်ထက်မိုးဦးကတော့ တစ်ခါမှမမြင်ဖူး၊ မဆုံဖူးပေမယ့် အနုပညာမျိုးဆက်သစ်တွေအပေါ်ကိုလည်း ပညာတွေသင်ပေး၊ ဆုံးမစကားတွေပြောပေးတာ တကယ့်ကို လေးစားစရာ အချက်တစ်ချက်ပါပဲ။ အုပ်စိုးခန့်ကလည်း ထက်ထက်မိုးဦးလို အနုပညာရှင်ကြီးနဲ့ ဆုံတွေ့ရလို့ အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ပညာတွေရရှိမှာ အသေအချာပါပဲ။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
အလုပျတှဆေကျတိုကျကွိုးစားနတေဲ့ အုပျစိုးခနျ့က ဒီတဈခါမှာလညျး နိုငျငံကြျော အကယျဒမီထကျထကျမိုးဦးနဲ့အတူတူ နာမညျကွီးကားအမှတျတံဆိပျကို အှနျလိုငျးကနေ ရောငျးခပြေးခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ အုပျစိုးခနျ့ကတော့ ထကျထကျမိုးဦးနဲ့ ပထမဦးဆုံးအကွိမျ ဆုံတှစေ့ဉျမှာပဲ သငျယူစရာတှရေရှိခဲ့ကွောငျးကို “အပွငျမှာအရမျးခဈြဖို့ကောငျးတဲ့ မထကျ ! ပညာတှမြေားကွီး သငျပေးတယျ။ ပွီးတော့ မြားကွီး လဲ ဆုံးမစကားတှပွေောသှားတယျ🙏🏻💞 Cutestttt 💞💞💞💞💞” ဆိုပွီး ထကျထကျမိုးဦးအကွောငျး ပွောလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ထကျထကျမိုးဦးကတော့ တဈခါမှမမွငျဖူး၊ မဆုံဖူးပမေယျ့ အနုပညာမြိုးဆကျသဈတှအေပျေါကိုလညျး ပညာတှသေငျပေး၊ ဆုံးမစကားတှပွေောပေးတာ တကယျ့ကို လေးစားစရာ အခကျြတဈခကျြပါပဲ။ အုပျစိုးခနျ့ကလညျး ထကျထကျမိုးဦးလို အနုပညာရှငျကွီးနဲ့ ဆုံတှရေ့လို့ အဖိုးမဖွတျနိုငျတဲ့ ပညာတှရေရှိမှာ အသအေခြာပါပဲ။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
Previous post ” တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ညကတော့ သူမအတွက်ကု သိုလ်စိတ်နဲ့ ပျော်ရွှင်ခဲ့ရသော အလှူလေးတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ တာကြောင့် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ညတစ်ညဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ အေးမြတ်သူ”
Next post ချစ်သူပြင်သစ်နိုင်ငံသားလေးကို ကချင်ရိုးရာဝတ်စုံဝတ်ဆင်စေပြီး မျိုးရိုးဓလေ့ထုံးတမ်းအတိုင်း မင်္ဂလာဆောင်ခဲ့တဲ့ အမွန်း